Luulyo 6, 2019 7:43 b 0
Iiraan ayaa cambaaraysay waxa ay ugu yeertay qabsasho sharci darro ah, markabka saliidda cayriin waday ee dalkaasi ee UK ay ku qabatay xeebaha jaziiradda Gibraltar ee u dhaxeeya dalalka Spain iyo UK, waxaana Iiraan ay dalbatay in sidegdeg ah lagu siidaayo markabkaasi.
Sarkaal sare oo katirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa ku tilmaamay tilaabada dowladda UK mid aan la aqbali karin, kadib kulan uu la yeeshay safiirka dowladda UK ee Iiraan oo loo yeeray, si uu u dhagaysto cabashada Iiraan, sidaasina waxaa lagu yiri qoraak Jimcihii kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan.
“Waxaa loogu baaqayaa UK inay si degdeg ah usiidayso markabka saliidda waday ee ay qabsadeen, kadib codsi uga yimid Mareykanka” ayaa lagu yiri qoraalka.
Muxsin Rexai oo ah taliye sare oo katirsan ciidamada kacaanka ee Iiraan ayaa boggiisa Twitterka ku sheegay haddii markabka aan la siidayn inay gudan doonaan waajibkooda oo ay samayn doonaan talaabo la mid ah kan markabkooda lagu qabsaday, iyagoo qabsanaya markab shidaal oo laga leeyahay dalka Iiraan.
Ciidamada badda ee boqortooyada UK, booliska iyo hay’adaha canshuuraha ee UK oo markabka qabtay Khamiistii ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen markabka Grace 1 , iyagoo ku tuhmay inuu saliid cayriin ah u waday dalka Suuriya, arrintaasi oo ay ku sheegeen mid ka dhan ah cunqabataynta Midowga Yurub uu saaray dowladda uu madaxwaynaha ka yahay Bishaar Al-asad ee Suuriya.
Afhayeen u hadlay ciidamada UK ayaa sheegay shaqaalaha markabka saaran oo ay tiradoodu tahay 28- shaqaalle ay u dhasheen dalalka India, Pakistan iyo Ukrain.